Fanararaotana ara-pitsaboana | Ny Fanorenana Valisoa - Ny fitiavana, ny firaisana ary ny Internet
Home Resources Medical Disclaimer
Ity fanambarana ity dia ny fanazavana ara-pahasalamana ho an'ny The Reward Reward Foundation. Ity tranonkala ity dia ahitana fampahalalana ankapobeny momba ny toe-pahasalamana sy fitsaboana Ny torohevitra dia tsy toro-hevitra, ary tsy tokony horaisina toy izany.
Ny fampahalalana ara-pahasalamana ao amin'ity tranonkala ity dia omena "toy ny" raha tsy misy fampisehoana na fanomezan-toky, maneho na miseho. Ny Valin'ny Fananana dia tsy mampiseho fisehoana na fiantohana mifandraika amin'ny fampahalalam-baovao ao amin'ity tranonkala ity.
• Ny fampahalalana ara-pahasalamana ao amin'ity tranonkala ity dia mety ho azo ampiharina foana, na azo alaina; na
• Ny fampahalalana ara-pahasalamana ato amin'ity tranonkala ity dia feno, marina, marina, mahitsy, na tsy mamitaka.
Tsy tokony hiantehitra amin'ny fampahalalana ao amin'ity tranonkala ity ianao raha oharina amin'ny toro-hevitra ara-pitsaboana avy amin'ny dokotera na mpitsabo matihanina hafa.
Raha manana fanontaniana manokana momba ny raharaha ara-pahasalamana ianao dia tokony hifantoka amin'ny dokotera na mpitsabo hafa momba ny fahasalamana.
Raha mieritreritra ianao fa mety hijaly amin'ny toe-pahasalamanao ianao dia tokony hikaroka fitsaboana avy hatrany.
Aza misalasala mitady torohevitra momba ny fitsaboana, tsy miraharaha ny torohevitra momba ny fitsaboana, na mijanona amin'ny fitsaboana noho ny fampahalalana ao amin'ity tranonkala ity.
Tsy misy na inona na inona ao anatin'ity fampiharana ara-pahasalamana ity dia hametra ny fandoavana ny trosantsika na inona na inona izay tsy avela eo ambanin'ny lalàna mihatra, na manilika ny sasany amin'ireo trosantsika izay mety tsy azo ekena eo ambanin'ny lalàna mihatra.
Ity rakitra ity dia noforonina tamin'ny fampiasana ny môdely Contractology azo alaina ao amin'ny http://www.freenetlaw.com.